सुरेन उप्रेती, (ओटावा, क्यानाडा)
प्रविणलाई कक्षा शुरु हुनु अगावै एउटा किताव लिनु थियो । उ हतार हतार लाइब्रेरीतिर जाँदै थियो । 'हाई प्रविण' भनेको सुनेर यता उता हेर्यो । सिन्थियाले बोलाएको रहेछ । उनले आएर प्रविण सँग हात मिलाइन । सामान्य भलाकुसारी पछि 'म अलि हतारमा छु, पछि कुरा गरौँला हुन्न ?' भनेर अगाडी बढयो । सिन्थियाले 'प्रविण, तिमीलाई थाहा छ उ मेरी साथी पनि नेपाली हुन नी ! उनको नाम कुसुम हो' भनेर साथीतिर देखाइन् । 'नमस्ते, म प्रविण' भनेर कुसुमतिर हेर्यो । 'म कुसुम' भनेर उनले पनि हात हल्लाइन् ।
प्रविण उनीहरुसँग छुट्टिएर लाइब्रेरीमा गयो । हतार हतार किताव लिएर कक्षामा आयो । उसलाई कता कता कोहि चिनेको आफन्त भेटे जस्तो लाग्यो । हुन त विदेशमा पुगे पछि आफ्नो देशको मान्छे भने पछि आफन्तनै भेटेजस्तो हुनु स्वभाविक नै हो तर पनि उसलाई अझ नजिकको कोहि भेटेजस्तो भएको थियो । उ कक्षामा पुग्दा शिक्षक आएर पढाउन शुरु गर्दै रहेछन् । उ सँधै पहिलो लाइनमा नै बस्थ्यो । आज पनि त्यहीँ � ाउँमा गएर बस्यो । शिक्षकले पढाएका कुरामा ध्यान केन्द्रीत गर्न निकै प्रयास गर्यो । तर छिन छिनमा उसको मन अन्यत्रै घुम्दै हुन्थ्यो । आधा उधी मात्र नोट गर्यो । कति अगाडी पछाडी छुटेर बिचका बूदाहरुमात्र टिप्न भ्यायो । एक पटक शिक्षकले उसलाइ के सोधेको रहेछ थाहानै पाएन । सबै साथीहरु हाँसेपछि मात्र थाहा भयो । उसका गाला राता भए । उसले आफुलाई तातो भएको महसुस गर्यो ।
कक्षा सकिए पछि क्याफ्टेरियामा गयो । उसका आँखाले सबैका अनुहार सरसर्ती पढे । हरेस खाइसकेका आँखाले हलको दाहिने तिरको कुनामा सिन्थिया र कुसुमलाई देखे । उ कसैले डोर्याएको मान्छे झैँ केहि नसोची उनीहरु बसेको � ाउँमा मेच तानेर बस्यो । उनीहरु पिज्जा खान लागेका रहेछन् । उसलाई पनि खाउँ भने तर उ म लिएर आउँछु भनेर ब्याग चेयरमा राखेर क्याफ्टेरिया भित्र गयो ।
'उ पढनमा मात्र हैन जुन खेलमा भाग लिन्छ त्यसमा पनि दोश्रो हुँदैन । सारै मेहनती प्रतिभाशाली र असल छ ।' सिन्थियाले प्रविणको प्रतिभाको बारेमा कुसुमलाई सुनाइन । चिकेन ड्र्मस्टीक र राइस लिएर प्रविण आयो । उनीहरुलाई पनि ड्र्मस्टिक खान भन्यो । दुबैजनाले एक एक पिस लिए । सिन्थियाले 'गत बर्ष नेपाल जाँदा कसुम र उनका बा आमासँग भेट भयो र उनीहरुकै घरमा बसेँ । बुबा आमा सारै असल हुनुहुन्छ' भनेर सुनाइन । तिमीहरु नेपाली भाषामा कुरा गर न मलाई सुन्न सारै मन पर्छ भनेर कुरा गर्न अझ सजिलो बनाइ दिइन । दुबैले एक अर्काका बारेमा सोध खोज गरे । प्रविण तेश्रो बर्ष र कुसुम प्रथम वर्षमा वातावरण विज्ञान पढ्दै थिए । उनीहरुले पढाइका बारेमा पनि कुरा गरे । कसुमले आफुलाई अप्� यारो लागेका विषयका बारेमा सुनाइन । प्रविणले आफ्ना पुराना नोट खोजेर दिन्छु । न आएका कुरा सोध्नु भन्यो । फोन नम्बर आदान प्रदान गरेर उनीहरु छुट्टिए ।
कुसुम सिन्थियाको घरमा नै बस्थिन् । त्यहाँ बस्दा सबै सुविधा भए पनि अलग अलग साँस्कृतिक पृष्टभूमिबाट आएका हुनाले सिन्थिया र उनमा थुप्रै भिन्नताहरु थिए । एक अर्कासँग मिल्नलाई दुबैले परिस्थितिसँग थुप्रै सम्झौताहरु गरेका थिए । तर पनि जीवनका दुई दशक भन्दा लामो दिनचर्यासँग अभ्यस्त जीवनबाट मुक्त हुन त्यती सजिलो थिएन । भोली भनेको अनिश्चित छ त्यसैले जीवनको मज्जा आजनै लिनु पर्छ भन्थिन सिन्थिया । उनी बारडान्स, रेष्टुरेण्टमा गएर हप्ताअन्त बिताउन चाहन्थीन् । तर यो सबै कुसुमको सोच विपरित थियो । यो समय भनेको भोलीको सुन्दर सँसार निर्माण गर्नमा लगाउने हो । आज मेहनत गर्यो भने भोली सुख हुन्छ । परिश्रमको फलमात्र मि� ो हुन्छ भन्नेमा कुसुम विश्वास गर्थिन् ।
कुसुमलाई सिन्थियालाई जति सजिलो पनि त थिएन । नेपालबाट प� ाएको पैसाले क्याम्पसको फि तिर्नु, कपी, किताव खानबस्न सम्पूर्ण खर्च पुर्याउनु पर्थ्यो । काम गर्दै पढ्नेबारेमा पनि नसोचेको होइन तर पढाइको बोझले उनलाई उ� ्नै दिएको थिएन ।
घरमा पुग्नासाथ सिन्थियालाई ब्वाइफ्रेण्डको फोन आयो र बाहिर निस्किन् । कुसुम बेडमा पल्टिएर दिउँसो पढेको नोट हेर्न थालिन् । तर उनका आँखा मात्र नोटमा अडिए । उनको मन प्रविणको बारेमा प्रश्नोत्तर गर्न थाल्यो । कति सरल छ उसको स्वभाव । त्यस्तो प्रतिभावान भएर पनि रतिभर घमण्ड छैन । लेखनाथ पौडेलको "झुक्छन् वृक्ष सदैव फलफूलले, भारी हुँदामा अति' भन्ने कविताको हरफ उनका बुवाले सँधै भन्ने गरेको याद आयो । उनलाई फोन गर्न मन लाग्यो । फेरी के सोच्ने होला भन्दै नोटकपिमै आँखा विछ्याइन् । तै पनि आँखाले फोन नम्बर फेला पारे । मन डराउँदै थियो । उनका ती साना सुरिला औँलाले फोन डायल गरे । अब के भन्ने होला भन्दै डराउँदै रिसिभर कानको छेउमा राखिन् । तीन घण्टी जाँदा पनि फोन नउ� े पछि फोन राखिन् । उनलाई त्यसै खल्लॊ लाग्यो । कस्तो फोन गर्दा पनि नभेटिने मान्छे भन्दै अर्का तिर फर्किएर बेडमा पल्टिन । केहिबेर पछि उ� ेर नुहाउन गइन् । आज उनको मन निकै खुसी छ । उनी गीत गाउन भने पछि चारकोस भाग्ने मान्छे तर आज उनलाई गीत गुनगुनाउन आयो । 'खुसी छु म आज तिमी भन्दा धेरै' भन्ने गीतको पँक्तिलाई पटक पटक दोहोर्याई तेहर्याई गुनगुनाइन् । कपाललाई टावलले पुछ्दै ऐनाको अगाडी गएर उभिइन । आफैँसँग लाज लाग्यो । आँखा चिम्लिएर दुई हातले आँखा छोपिन् र अर्कातिर फर्किन् ।
प्रविण र कुसुमको भेट दिन दिनै हुन थाल्यो । कुसुमलाई प्रोजेक्ट गर्नु पर्दा परिक्षाको तयारी गर्नुपर्दा प्रविणले सँधै सहयोग गर्थ्यो । प्रविणको प्रशँसा गर्दै सबै कुरा आमालाई फोनबाट सुनाइन् । 'परदेशमा पनि त्यस्तो सहयोग गर्ने मान्छे कहाँ पाइन्छ र तिमी त सारै भाग्यमानी रहिछौ छोरी' आमाले भन्नु भयो । कुसुमको जन्म दिनमा उनलाइ सारै मन पर्नै एक जोडी लुगा किनिदियो । सिन्थिया र कुसुमलाइ रेष्टुरेण्टमा लगेर खाना ख्वायो । 'आमा लुगा त कति महँगो पो किनेको, कस्तो राम्रो छ' भनेर कुसुमले आमालाई सुनाइन् ।
विदेशमा गए पछि आफ्ना चाड पर्वको झनै महत्व बढ्छ । दसैँ मनाउन अटवामा बस्ने सबै नेपालीहरु भेला भए । प्रविण र कुसुमपनि कार्यक्रममा सहभागी भए । बिभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रम नाचगान गरेर टिका लगाए । सबैका अनुहारमा हाँसो र खुसी छायॊ । यस पालीको दसैँ त नेपालमा हुदाको भन्दा रमाइलो भयो भनेर कुसुमले आमालाई फोनमा भनिन् ।
क्याम्पसमा परिक्षाहरु आउने जाने क्रम चलिरहेको थियो । यो हप्तामा तीनवटा विषयको परिक्षा दिनु परेकाले कुसुम पनि पढ्दा पढ्दै दिक्क भएकी थिइन् । शुक्रबार बेलुका प्रविणको फोन आयॊ । परिक्षाका बारेमा कुरा गरी सकेपछि भोली विहान मेरामा आउ है कुसुम भनेर प्रविणले बोलायॊ । छट्पट् हुँदै पटक पटक बिउँझिएर घडी हेरिन् । मनले थुप्रै सपनाहरु बनायो । रात भरी राम्रो निन्द्रा लागेन । विहानी पख भए पछि निदाइछन् । सपना पनि कस्तो देखेको । उनले त तिजका महिलाहरुले जस्तै पूरै राता लुगा लगाएको रहेछ रे । बिउँझदा सात बज्न लागेको रहेछ । हतार हतार गरेर नुहाइन । एक कप चिया खाएर ऐना अगाडी गएर उभिइन् । आँखा सुन्नीए जस्ता भएर विझाए ।
प्रविणकोमा पुग्दा साडे नौ नै भइ सकेछ । बै� कको सोफामा गएर बसिन् । बै� कको टेवलमा फलफूलहरु सजाएर राखेका रहेछन् । अगाडी भित्तामा एउटी साडी लगाएकी केटीको फोटो झुण्डिएको थियो । उनका आँखा त्यही फोटोमा गएर � ोक्कीए । 'अहा कस्तो मेरो जस्तै फोटो यो कस्को फोटो ?' कुसुमले सोधिन् । प्रविण उनका छेवैमा आएर सोफामा बस्यो । फोटोतर्फ तेर्सिएका आँखाभरी आँसु बनाउँदै 'अब उनी छैनन् । यस धर्तिमा बाँच्न दिएनन्' भनेर उ बोल्न सकॆन । आँखाका आँसु पुछ्दै लामो सास तानेर फेरी बोल्न खोज्यो । उनी मेरी एकमात्र …भनेर फेरी अड्कीयो । उनी तिमी जस्तै छन् है कुसुम भनेर कुसुमका हात समाएर चुम्यो । 'दुई बर्ष अगाडी दाइजो कम ल्याइ भनेर पटक पटक कुटेछन् र मट्टीतेल खन्याएर …' भनेर फेरी वोल्न सकेन । उ� ेर बाथरुम तिर गयो । मुख धोएर टावेलले मुख पुछ्दै भान्सामा गयो । भान्साबाट एउटा � ूलो थाली लिएर आयो । थालीमा मैनवत्ती बल्दै थियो । एउटा ग्लासमा पानी थियो । ग्लासका छेउमा तीन चार थुँगा फूल थिए । छेउमा रातो निलो पँहेलो र सेतो रँग थिए । 'आज मैले चार वर्ष पछि मेरी बहिनीलाई भेटेँ । तिमीलाई थाहा छ कुसुम आज भाइ टिका हो नि' भन्दै थालीलाई सोफा छेउको टेवलमा राखेर निधारबाट कपाललाई हातले पन्छाउँदै कुसुमतिर फर्किएर बस्यो ।
bikash devkota nayaghare
namaskar.nepali bhasa ra sahitya ko laagi garnu bhayako prayesh ko laagi dhanyadad.